𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 နဲ့ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ကို အတူတူလို့ သင်ထင်ပါသလား??? - The Khant Digital
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 နဲ့ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ကို အတူတူလို့ သင်ထင်ပါသလား???
DM နဲ့ SMM အကြောင်းကို သေသေချာချာမသိတဲ့လူအများစုက သူတို့ကို အတူတူလို့ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အတူတူမဟုတ်ပါဘူး။ Social Media Marketing ဟာ Digital Marketing ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာရှိတာပါ။
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 မှာ ဘာတွေပါဝင်သလဲ?
Digital Marketing ကို Online ရယ်၊ Offline ရယ် နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။
– Mobile Marketing (Google Play, Apple Store, etc)
Social Media Marketing ဟာလည်း Digital Marketing ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ဆိုတာဘာလဲ?
ဦးစွာ Social Media အကြောင်းကို ရှင်းပြလိုပါတယ်။ Social Media ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အများစု နေ့စဉ်နဲ့အမျှအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn နဲ့ YouTube တို့လို့ Social Media Website တွေ (သို့မဟုတ်) Social Media Apစlication တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလို Social Media တွေကို အသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်းကို Social Media Marketing လို့ခေါ်ပါတယ်။ Social Media Marketing ဆိုတာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Digital Marketing ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာရှိတာပါ။
ကဲ အပေါ်ကစာတွေကို ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ မိတ်ဆွေ Digital Marketing နဲ့ Social Media Marketing ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုသိပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ မိတ်ဆွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် (သို့) ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ The Khant Digital 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐚𝐠𝐞 ကို 𝑳𝒊𝒌𝒆 & 𝑭𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Online မှာ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ဖို့ Facebook Page တစ်ခုလိုနေပြီလား? Website တစ်ခုလိုနေပြီလား? ဒါမှမဟုတ် လိုနေပြီလို့ထင်ပါသလား? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အချိန်တိုတိုအတွင်း အောင်မြင်မှုရအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ Digital Marketing လည်း အရေးကြီးတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။
← Prev: တိတိကျကျ အသက်ဝင်လာတော့မည့် ယူနီကုတ် Next: Web Development ကိုလေ့လာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? →